Xagee Marayaa dadaalka loogu jiro joojinta Cunista Qaadka ee UK (Maqaal). | Sahan radio
Qore: Adan Jamac Kahin.
Waxan halkan marka hore salaan uga soo jeedinaya dadka akhrisanaya qoraalkan. dhamaantiinba waxa ogaataan Sida kor ku xusanba anigoo ka mid ah Gudiga ee mutadawaca ah ee la dagaalanka iyo joojinta ee Maandooriyaha Qaadka.
Waxan arrintan kaampaynkeeda wadnay waqti dheer , taasoo isugu jirtay wacyi gelin iyo saxeexyo farabadan oo laga arruriyay dadka ka soo horjeeda qaadka si dawladan loogu gudibiyo codkooda, isku dubarid shirar badan oo lagaga hadlaayo qaadka iyo dhibaatada uu u leeyahay dadkeena iyo dalkeenaba kuwaasoo aanu ku casuunay MP (member of parliament), counsellors iyo wixii la mid ahba.
Waxa kaloo isna jiray in Gudomiyaha Ururkan Mr. Abukar Awale uu runtii arrintan dawr weyn ka ciyaaray , isagoo olalahaa joojinta Qaatka geed dheer iyo geed gaabanba u korey sanada badana daba taagna, ha ahaato la kulanka madax dawlada ee UK, ama wacyi gelin toosa oo uu marwalba kala hadlo dadyawgeena halkan degan iyo kuwa kaleba sidii ay uga digtoonan lahaayeen sunta cagaaran. Waxa iyana Xusid mudan in uu Abokor wiigiiba mar toos uu uga sii daayo TVyada somalida barnaamuj ku saabsan joojinta qaadka.
Waxa kaloo aan idin sheegaya in labadayaduba midkeena u shaqeyo Iskuul ka kalena shirkad, laakiin tan la dagaalankan Mandooriya Qaat aan u wadno uun nin dadkiisi u caawinaya mutadacnimo uun iyo dar iaahay.
Waxanu marka ku guulasanay halkan inan helo MPga ugu dadaalka badan ee dhinaca joojinta Qaadka ee UK. Marka xidhiidha caadiya oo MP la qaatay mooyaane markii danbe waxanu ku qabanay Milton keynes shirweyn oo arrintaa lagaga hadlaayo , shirkaaso ay ka soo qaybgaleen dadka reer Milton keynes ee halkan degan badankooda , kaasoo aan ku casuunay Mr Laarcaster oo ah MP Milton keynes kana tirsan xisbiga conservativka.
Mr. Laancaster oo ah madaxa keliya ee isu taagay arrintan ka midha dhalinteeda isla markaana ah MP keliya ee arrintan u olaleya , oo si cad u gartay dhibaatada uu qaadku ku hayo bulshada somalida, ha noqoto burburka reeraha, caruurta, caafimaad darro , shaqo la’an, waxbarasho liidata, soo jiidasho dhalinyaradu inay muqadaraadka kalena isticmaalaan – gang cultureka waxa loo yaqaanba akhirka ka midnoqdaan. Waxaasoo dhibaato ah inuu qaadku u leeyahay dadka dhamaan ka yimi geeska afrika ku ayuu fahmay Mr. Laarcaster.
3- Mr. Laarcansan (Milton keynes MP), wuxu bishan gudaheeda la kulmay 7 qof oo MPyna ah oo ka soo jeeda xaafadaha somalidu ku badantahay iyo Chairmanka Conservative Party Mrs. Warsan oo asalkeedu ah Pakistan, iyo Charimanka Gudigayaga si arrinta looga hadlo. Wuxu Mr. Laarcastan ka codsaday inay gacan ka siiyaan iyaguna inay hawsha joojinta la dhamaystiraan. Shirka 6 ka mid ah MP way qaateen arrinta loo soo jeediyay halkan 1 uu ka diiday,Halka arrintu ka dhacaysay waxa goobjoog noo ahaa Mr. Abukar oo matalayay ururkaga.
Gabagabo, ma doonayo inaan halkan ka sheego aafada uu Jaadku ku hayo dhulkeeni hooyo iyo meelaha kaleba, lacag malaayiin Dollar ah ayaa dawladahah jiiraanka ah inagaga baxda kuwaasoo horena dhul aan leenahayba hore inooga haystay, hadana ku darsaday dhaqaalehni waliba , waali iyo darxumana inoogu bedelay.
Taasoo xita la odhankaro arrintani waxay sababtahay inay maandooriyaha xitaa reer miyiga barteen oo cunaan dabadeedna ay xaalufiyaan dhulkii iyagoo dhuxul ka shidaaya si ay qaad uga iibsadaan, taasina waa aafa cusub oo inagu soo korodhay. Waxay taasi waxyeelaysa roobkii oo dhulka ku yaraada , xoolihi oo meel ay daaqanba waaya , abaar iyo biyo laa’an soo noqnoqota iyo dhaqaalihi ka soo bixi jiray Xoolaha oo leeda. wuxu dhiiri geliya Qaatku sidoo kale mashaqaysta nimada bulshada, iyo musuqmaasaq si loogu iibsado lacagta la helo Qaatka isla markaana ka qaybqaata burburinta reeraha sidan hore u soo sheegayba iyo caafimaad xumadaba.
Ugu danbayn haddii arrintan imika la isu taagi waayo oo indhaha laga qarsanaayo mustaqbalka dalka iyo ummadaba meel dheerba laga dooni doona. Kolay qorshahaygu se itaalku meeshu doone ha nagaadhsiiye waxanu jeclahay hadaan ku guulaysano joojinta Qaatka ee UK, in aan dabadeedna aanu u jeesano siddii aanu wadankii wax uga qabanlahayn anakoo khibradayada ka faaiidaysanayna waayo sidan uu ku socda wax la eegan karo maaha.
Ilaa haddana ma hayo qof iska soo sharxay dalkeeni oo arrinta ka hadlaaya, waxaad moodaaba inuu qaatkii dadkii ka adkaaday. Waxan gaba gabdii aad ugu mahadnaqaya raggii iyo dumarkii reer Milton keynes ee arrinta sida fiican ugaga qayb qaatay kuwaaso uu ka mid yahay Mudane Buraale Xalene, Abdulahi Yusuf, Mohamoud Adan , Mohamoud Adan iyo Ebtessam Adam.